တစ်ကိုယ်တော် Showပွဲအတွက် ဘယ်လိုနေ့မျိုးမှာလုပ်ရင်ကောင်းမလည်းဆိုပြီး ပရိတ်သတ်ထံအကူအညီတောင်နေတဲ့ ဝိုင်းစုခိုင်သိန်း » Today Bago
HomeLifestyleCelebrityတစ်ကိုယ်တော် Showပွဲအတွက် ဘယ်လိုနေ့မျိုးမှာလုပ်ရင်ကောင်းမလည်းဆိုပြီး ပရိတ်သတ်ထံအကူအညီတောင်နေတဲ့ ဝိုင်းစုခိုင်သိန်း တစ်ကိုယ်တော် Showပွဲအတွက် ဘယ်လိုနေ့မျိုးမှာလုပ်ရင်ကောင်းမလည်းဆိုပြီး ပရိတ်သတ်ထံအကူအညီတောင်နေတဲ့ ဝိုင်းစုခိုင်သိန်း May 26, 20170comments Khine Khine Myint Posted in CelebrityLifestyle0သို့’
ဝိုင်းစု တယောက်တည်း မစဉ်းစားတတ်တော့လို့
Mini အခွေ ‘မယ်သီတာ’ audio cd နဲ့ ‘ဂါ’ DVD အခွေတွေ ထွက်ပီးရင် တကိုယ်တော်ရိူးပွဲ
ဝိုင်းစုက အောက်တိုဘာလ ထဲမှာ လုပ်ဖို့ တွေးထားတာ
အမှန်ကတော့ ပထမ ရိူးပွဲတည်းက မွေးနေ့ ဖြစ်တဲ့
ဒီဇင်ဘာ ၂၄ ရက်နေ့မှာ လုပ်ချင်ခဲ့တာပါ’
ဒါပေမဲ့ ဝိုင်းစု မွေးနေ့ရက်မှာ လုပ်ရင် ခရစ်စ္စမတ် အကြိုည
ဖြစ်တော့ အဲဒီရက် အဲဒီရာသီမျိုးမှာ ပွဲ များတတ်တာနဲ့
စိုးရိမ်ပြီး ပထမပွဲတုန်းက မွေးနေ့ရက်မှာ
အခု ရန်ကုန်မှာ ဒုတိယအကြိမ်မြောက်လုပ်မဲ့ ပွဲမှာတော့
မွေးနေ့ရက်မှာ လုပ်ချင်မိတာ အမှန်ပါရှင့် 🤗
ကိုယ့်ကို ချစ်ကြပြီး ကိုယ်ကချစ်ရတဲ့သူတွေနဲ့
မွေးနေ့လို ရက်မျိုးမှာ အမှတ်တရ ဆုံချငိမိတယ်’
တကယ်လို့ ဝိုင်းစုက ဒီနှစ် မွေးနေ့မှာ
ဒါမှ မဟုတ် ပွဲများလို့ တခြားပွဲကို ဦးစားပေးပြီး
ဝိုင်းစုကို ပစ်ထားကြမှာလား ?
ဝိုင်းစု မွေးနေ့မှာပဲ တကိုယ်တော်ပွဲလုပ်ရမှာလား?
အားလုံး အဆင်ပြေ ကြမဲ့ ရာသီမျိုးကို
ချစ်ရင် အကြံပေးခဲ့ပါနော် 😘
အားလုံးလဲမြင်စေချင်လို့ share လို့ရရင် share ပေးပါ့လားလို့ Source:FB
တဈကိုယျတျော Showပှဲအတှကျ ဘယျလိုနမြေို့းမှာလုပျရငျကောငျးမလညျးဆိုပွီး
ဝိုငျးစု တယောကျတညျး မစဉျးစားတတျတော့လို့
Mini အခှေ ‘မယျသီတာ’ audio cd နဲ့ ‘ဂါ’ DVD အခှတှေေ ထှကျပီးရငျ တကိုယျတျောရိူးပှဲ
ဝိုငျးစုက အောကျတိုဘာလ ထဲမှာ လုပျဖို့ တှေးထားတာ
အမှနျကတော့ ပထမ ရိူးပှဲတညျးက မှေးနေ့ ဖွဈတဲ့
ဒီဇငျဘာ ၂၄ ရကျနမှေ့ာ လုပျခငျြခဲ့တာပါ’
ဒါပမေဲ့ ဝိုငျးစု မှေးနရေ့ကျမှာ လုပျရငျ ခရဈစ်စမတျ အကွိုည
ဖွဈတော့ အဲဒီရကျ အဲဒီရာသီမြိုးမှာ ပှဲ မြားတတျတာနဲ့
စိုးရိမျပွီး ပထမပှဲတုနျးက မှေးနရေ့ကျမှာ
အခု ရနျကုနျမှာ ဒုတိယအကွိမျမွောကျလုပျမဲ့ ပှဲမှာတော့
မှေးနရေ့ကျမှာ လုပျခငျြမိတာ အမှနျပါရှငျ့ 🤗
ကိုယျ့ကို ခဈြကွပွီး ကိုယျကခဈြရတဲ့သူတှနေဲ့
မှေးနလေို့ ရကျမြိုးမှာ အမှတျတရ ဆုံခငြိမိတယျ’
တကယျလို့ ဝိုငျးစုက ဒီနှဈ မှေးနမှေ့ာ
ဒါမှ မဟုတျ ပှဲမြားလို့ တခွားပှဲကို ဦးစားပေးပွီး
ဝိုငျးစုကို ပဈထားကွမှာလား ?
ဝိုငျးစု မှေးနမှေ့ာပဲ တကိုယျတျောပှဲလုပျရမှာလား?
အားလုံး အဆငျပွေ ကွမဲ့ ရာသီမြိုးကို
ခဈြရငျ အကွံပေးခဲ့ပါနျော 😘
အားလုံးလဲမွငျစခေငျြလို့ share လို့ရရငျ share ပေးပါ့လားလို့
ဥရောပဖလားနှစ်လုံး နှစ်ကြိမ်ရယူနိုင်သည့် ပထမဆုံးနည်...	May 26, 2017	0 comments တရုတ်နိုင်ငံက စိတ်ကူးယဉ်ဆန်ဆန် ၀ါးဗိသုကာ အဆောက်အဦ...	May 26, 2017	0 comments Share this 6SHARESFacebookTwitterGooglePinterestRedditTumblr